Vanin-dranomandry kely: inona izany, rehefa nitranga izany ary nahatonga | Meteorolojia amin'ny tambajotra
Portillo Alemanina | 30/03/2021 10:49 | Fisarahana
Ny ankamaroantsika dia mahalala ny vanim-potoana ranomandry mahazatra izay nitranga teto amin'ny planetantsika. Na izany aza, anio isika dia hiresaka momba ny vanim-potoana ranomandry kely. Tsy fisehoan-javatra manerantany fa vanim-potoana ivoahan'ny glaciation manamarika amin'ny fanitarana glaciers amin'ny vanim-potoana maoderina. Teo anelanelan'ny taonjato faha-13 sy faha-19, indrindra tany Frantsa. Izy ireo dia iray amin'ireo firenena nijaly indrindra tamin'ity karazana fihenan'ny mari-pana ity. Ity toetr'andro mangatsiaka ity dia nitondra vokadratsina ratsy ary nahatonga ny zanak'olombelona hifanaraka amin'ny toe-piainana vaovao.
Noho izany dia hanokana ity lahatsoratra ity izahay hilaza aminao izay rehetra ilainao ho fantatra momba ny vanim-potoana ranomandry kely sy ny lanjan'izany.
1 Vanin-dranomandry kely
2 Fianarana momba ny vanim-potoanan'ny ranomandry
4 Vanim-potoana ranomandry
Ity dia vanim-potoana hatsiaka niseho tany Eropa sy Amerika Avaratra tamin'ny taona 1300 ka hatramin'ny 1850. Mifanitsy amin'ny fotoana izay ny maripana dia ambany indrindra ary ny salanisa dia ambany noho ny mahazatra. Any Eropa ity tranga ity dia niaraka tamin'ny voly, mosary ary loza voajanahary. Tsy vitan'ny nahatonga ny fitomboan'ny rotsakorana tamin'ny endrika lanezy io, fa nampihena ny isan'ireo voly koa. Tokony ho raisina fa ny teknolojia misy eto amin'ity tontolo ity dia tsy mitovy amin'ny ankehitriny. Amin'izao fotoana izao dia manana fitaovana maro hafa isika hahafahana manamaivana ireo toe-javatra ratsy atolotra antsika amin'ireo toe-javatra ara-toetr'andro ireo.
Ny fanombohana marina ny vanim-potoana ranomandry kely dia somary manjavozavo. Sarotra ny hahafantatra hoe rahoviana no manomboka miova sy misy fiatraikany ny toetrandro. Izahay dia miresaka momba ny toetr'andro ho fanangonana ny angona rehetra azo arakaraka ny fandehan'ny fotoana any amin'ny faritra iray. Ohatra, raha manangona ny miovaova rehetra ihany koa isika toy ny maripana, habetsaky ny taratra masoandro, fitondrana rivotra, sns. Ary ampiantsika rehefa mandeha ny fotoana dia hanana toetr'andro isika. Ireo toetra ireo dia miovaova isan-taona ary tsy milamina foana. Rehefa milaza isika fa ny toetrandro dia karazana iray, dia satria ny ankamaroan'ny fotoana dia mifanaraka amin'ny sanda miovaova mifanaraka amin'io karazana io.
Na izany aza, tsy marin-toerana foana ny maripana ary miovaova isan-taona. Noho izany dia sarotra ny mahafantatra tsara rehefa niandoha ny vanin-dranomandry kely. Raha jerena ny fahasarotana amin'ny fanombanana ireo fizarana mangatsiaka ireo dia miovaova ny fetran'ny vanim-potoanan'ny ranomandry eo anelanelan'ny fandalinana hita momba azy.
Fianarana momba ny vanim-potoanan'ny ranomandry
Ny fandalinana nataon'ny Laboratoara Glaciolojia sy ny Geofisika momba ny tontolo iainana ao amin'ny Oniversiten'i Grenoble sy ny Laboratoire ny Glaciology ary ny Geofizika an'ny tontolo iainana ao amin'ny Sekolin'i Polytechnic Federal of Zurich, dia manondro fa ny fanitarana glacial dia vokatry ny fitomboan'ny rotsakorana, fa hatramin'ny fihenan'ny maripana marobe.
Nandritra ireo taona ireo, ny fandrosoan'ny glaciers dia vokatry ny fitomboan'ny mihoatra ny 25% ny oram-panala amin'ny vanin-taona mangatsiaka indrindra. Amin'ny ririnina dia mahazatra ny fisian'ny rotsakorana amin'ny endrika oram-panala amin'ny toerana maro. Saingy, tamin'ity tranga ity, ireo fihenan-tsambo ireo dia nanomboka nitombo ka nanjary nisy ireo faritra izay mbola tsy nilomano.
Hatramin'ny faran'ny vanim-potoanan'ny ranomandry kely dia saika nitohy ny fihemoran'ny glacier. Ny glacier rehetra dia namoy ny ampahatelon'ny volany manontolo ary ny hatevin'ny salan'isa dia nihena 30 santimetatra isan-taona nandritra io vanim-potoana io.
Andao hojerentsika izay mety ho antony mahatonga ny vanim-potoana ranomandry kely. Tsy misy marimaritra iraisana momba ny daty sy ny antony mety ho avy amin'ity vanim-potoana ranomandry ity. Ny antony lehibe indrindra dia mety noho ny taratra tara-pahazavana ambany kokoa avy amin'ny masoandro izay milatsaka amin'ny tany. Ity tranga tara-pahazavana ambany ataon'ny masoandro ity dia miteraka fihenan'ny faritra rehetra sy fiovan'ny toetr'andro. Amin'izany fomba izany dia miseho matetika kokoa ny orana amin'ny endrika lanezy.
Ny sasany kosa manazava fa ny fisehoan-javatra amin'ny vanim-potoana ranomandry kely dia vokatry ny fipoahan'ny volkano izay nanamaizina kokoa ny atmosfera. Amin'ireto tranga ireto dia miresaka zavatra mitovy amin'ilay voalaza etsy ambony isika fa misy antony hafa. Tsy ny habetsaky ny taratra masoandro avy mivantana avy amin'ny masoandro, fa ny maizina ny atmosfera no miteraka fihenan'ny taratra avy amin'ny masoandro izay misy fiatraikany amin'ny velaran'ny tany. Ny sasany amin'ireo mpahay siansa miaro an'io teôria io dia manamafy fa teo anelanelan'ny taona 1275 sy 1300, izay nanomboka ny ranomandry kely, Fipoahana volkano 4 tao anatin'ny XNUMX taona no tompon'andraikitra tamin'io tranga io satria niseho avokoa tamin'izany fotoana izany.
Ny vovoka volkanika dia taratry ny taratra taratra amin'ny masoandro amin'ny fomba maharitra ary mampihena ny hafanana totalin'ny tany. Ny Ivontoeram-pirenena amerikana misahana ny fikarohana atmosfera (NCAR) dia namolavola modely momba ny toetr'andro mba hitsapana ny vokatry ny fipoahan'ny volkano miverimberina, tao anatin'ny dimampolo taona. Ny voka-dratsy aterak'ireo fipoahan'ny volkano ireo amin'ny toetrandro dia mankasitraka ny vokatry ny fipoahan'ny volokano miverimberina. Ireo vokam-panangonana rehetra ireo dia niteraka ny vanim-potoanan'ny ranomandry kely. Ny vata fampangatsiahana, ny fanitarana ny ranomandry, ny fiovan'ny rano, ary ny fihenan'ny hafanana mankany amin'ny morontsiraka Atlantika dia tranga mety kokoa amin'ny vanim-potoanan'ny Ice kely.
Na izany aza, tsy maintsy raisina fa ny hamafin'ny vanim-potoanan'ny ranomandry dia tsy azo ampitahaina amin'ny vanim-potoana lava sy mahery hafa izay niainan'ny planetantsika teo amin'ny haavon'ny glaciation. Ny antony mahatonga ny trangan-javatra ara-toetrandro dia tsy fantatra loatra fa aorian'ity tranga ity izay rehefa niseho ireo zavamiaina maro karazana. Midika izany fa amin'ny fivoaran'ny fivoarana, ny vanim-potoanan'ny ranomandry niseho teto amin'ny planetantsika 750 tapitrisa taona lasa dia mety ho tsara.
Manantena aho fa amin'ity fampahalalana ity dia afaka mianatra bebe kokoa momba ny vanim-potoanan'ny ranomandry sy ny mampiavaka azy ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Meteorolojia amin'ny tambajotra » Haitoetrandro » Fisarahana » Vanin-dranomandry kely